Maitiro ekuvanza akateedzana kunyorera pane iyo iPad / iPhone | IPhone nhau
Maitiro Ekuvanza Serial Apps pane iPad / iPhone
Isu tiri vashandisi vazhinji vakatsoropodza kuda kwaApple nekusanganisira zvakati wandei zvekushandisa zvisina basa kune vanhuwo zvavo, asi kwete izvozvo chete, asi mania ekurega kutibvumira kuvabvisa pamadiro. Nekusvika kweICloud Drive, isu takaita switch yekusarudza kuti kana isu taida kuona iyo icon paSpringboard, saka mukana uripo uye Apple inoziva kuzviita. Na iOS 9.3 isu takavhura mukana wekuvanza idzi serial application dzeiyo iPadHaisi iyo inokurumidza uye yakapusa nzira iyo isu tese tinoshuvira, asi inoshanda, iyo ichatibvumidza isu kuti tirege kuona maficha senge «Stock Market» kamwe uye zvachose.
Una vez más, Reddit Iyo sosi yeruzivo senge hapana imwe, ndiyo nzira yatakadzidza nezve mukana wekuvanza mafomu ekunyorera aya uye nemabatiro atakaita kushanda nawo kukudzidzisa iwe kuzviita sei.
Ichokwadi chiri nyore pane chingaite, asi iwe unofanirwa kuve neruzivo nezve iOS. Kune izvi isu tinoshandisa iyo «Apple Configurator 2.2 Beta»Uye isu tichagadzira nhoroondo iyo yatakatara ma parameter e« kwete kubvumira zvimwe zvinoshandiswa »zvichitadzisa kushandiswa kwechishandiso. Isu tinongofanirwa kuwedzera ID yezvishandiso zviri mubvunzo, iyo runyorwa rwatinosiya pazasi. Zvinonzwika seChinese, ndinoziva, takagadzirira vhidhiyo yako kuti urege kurasikirwa nehunyanzvi hwekuti zviri nyore sei. Pakupedzisira isu tichaisa iyo mbiri uye izvo zvinoshandiswa zvinonyangarika.
1 Kugadzirira Kwechigadzirwa
2 Tsananguro yevhidhiyo dzidziso yekuvanza izvo zvinoshandiswa
3 Chinyorwa chemazita ekushandisa kuti ugone kuaviga
4 Kuiswa kweprofile
Tichava kudzorera mudziyo kuna iOS 9.3, rangarira ichi zvakanaka. Kuti tivanze zvinoshandiswa, chishandiso chinofanirwa kunge chiri mukutarisa maitiro muApple Configurator 2.2 Beta, nekuda kweizvi isu tinofanirwa kudzoreredza chishandiso kuIOS 9.3 neiyo .ipsw yatakatora uye isingabatidze mudziyo kana yangodzoreredzwa. Ipapo isu tichaibaya muApple Configurator uye isu tichapa zvinotevera mu "Gadzirira" basa pop-up, zviri nyore uye zvakapusa, asi chishandiso chinofanira kuve chakachena.
Isu tinokukurudzira kuti uite backup yechigadzirwa mu iTunes, mune ino kesi ini pachezvangu kuraira iTunes panzvimbo yeICloud nekuda kwezvikonzero zvenguva. Uyezve ita chokwadi chekuti une bhatiri rakaringana uye enda kumberi, ngatidzoserei chishandiso kuIOS 9.3. Rangarira kuti iOS 9.3 backups hazvishande kune iOS 9.2, saka fungisisa nokungwarira usati wagadzirisa. Zvakare rangarira kuti kunyangwe iri beta, painosvika pane yazvino vhezheni yakafanana neiyo yepamutemo vhezheni, saka haufanire kuidzosera zvakare.
Tsananguro yevhidhiyo dzidziso yekuvanza izvo zvinoshandiswa
Chinyorwa chemazita ekushandisa kuti ugone kuaviga
com.apple.stocks - Bhegi
com.apple.tips - Matipi
com.apple.videos - Mavhidhiyo
com.apple.mobilemail - Tsamba
com.apple.mobilenotes - Zvinyorwa
com.apple.reminders - Zviyeuchidzo
com.apple.Maps - Mepu
com.apple.Music - Mumhanzi
com.apple.Health - Utano
com.apple.mobilephone - Runhare
com.apple.MobileStore - iTunes Chitoro
com.apple.MobileSMS - Meseji
com.apple.VoiceMemos - Kurekodha kwezwi
com.apple.weather - Mamiriro ekunze
com.apple.mobileme.fmf1 - Tsvaga Shamwari Dzangu
com.apple.mobileme.fmip1 - Tsvaga iPhone
com.apple.mobileslideshow - Mifananidzo
com.apple.Preferences - Zvirongwa
com.apple.news - Nhau
Kana tangopedza, isu tinochengeta iyo mbiri matiri takagadzirisa kumiswa kweaya maapplication, kuti gare gare tiende kumisikidza iyo pachayo pachayo pane chishandiso cheIOS. Ipapo isu ticha tangazve chishandiso kuti tione kuti maapplication atsakatika sei kubva kuChitubu. Chokwadi zviri nyore kupfuura zvinoita, asi kana zvikaitika kusahadzika isu takasanganisira iyo inotsanangura vhidhiyo. Nekudaro, isu tichagara tichikubatsira iwe kana iwe ukatibvunza isu chero mubvunzo mubhodhi rehomwe, paPad News News isu tiri pano kuzokubatsira uye isu tinoda kukuunzira iwe yakatsanangurwa uye yakagadziridzwa dzidziso. Nyore here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro Ekuvanza Serial Apps pane iPad / iPhone
Zvimwe chete zvandinotaura: Iyo mania yekuda kuvabvisa ...
Hazvirambiki kuti maapps akaita seBolsa haabatsire kune 99% yevanoshandisa iOS, uye kana ini ndisingade, sei vasingandipe mvumo yekubvisa app kubva pachigadzirwa chiri changu?
Kunze kwekunge paine mukana, uye kuti mumwe nemumwe anoita zvaanoona zvakakodzera. Kwazisai nekutenda nekuverenga, ndinokuona pano kazhinji 😉
Sebaßtian Quintero Santacruz akadaro
Asi izvi zvinongovaviga, hazvibvise. Iyo yakawanda yeanoonekwa emvura inodziya jira pane chaiyo mhinduro. Apple haibvumire kuwedzera kuyeukwa kwemidziyo nemakadhi e SD kana mamwe marudzi, saka kana iwe uchida imwe nzvimbo une YES kana Hungu kuti ushandise iCloud. Uye izvo zvinodhura.
Ndinovimba rimwe zuva ivo vachatibvumidza isu kubvisa akawanda asina basa mafomu.
Pindura Sebaßtian Quintero Santacruz
Uye kana iwe uchida kuita kuti zvionekwe zvakare, chii chandingaite? maererano
uye pandinomutsiridza zvinoonekwa, ndinofanira kuzviita sei?
Apple patents shanduko tambo yeApple Watch
Kutengesa kweiyo iPhone kwatodarika izvo zvePC